लिगलिगकोटमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : १४ असार २०७८, सोमबार ०७:३७
धार्मीक, ऐतिहासिक रुपमा परिचित पालुङटारको लिगलिगकोटमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको काम धमाधम भईरहेको छ । पालुङटार नगरपालिका २ मा पर्ने लिगलिगकोट केही वर्ष अघि र अहिले फरक छ । कारण त्यहाँ धेरै पर्यटकिय पूर्वाधार निर्माणले गती लिएको छ ।
पालुङटार नगरपालिका, पूर्वाधार बिकास कार्यालय गोरखा, डिभिजन बन कार्यालयको लगानीमा अहिले पनि कोटमा पुरातत्विक रुपमा पर्यटन पूर्वाधार बनिरहेको छ । लिगलिगकोट सम्म जान आउन छुट्टाछुट्टै सिँढी बाटो निर्माण गरिएको छ ।
बन डिभिजन कार्यालय गोरखाको सहयोगमा झण्डा राखिएको ठाउँमा ढुङ्गा बिछ्याउने काम भईरहेको छ । गत बैशाख २५ गतेबाट लिगलिगकोट पार्क निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गरेर स्थानीयले दर्फेदेवी मन्दिर पनि निर्माण गरेका छन् । ‘पुरातत्विक क्षेत्र भएका ढुङ्गा मात्रै प्रयोग भएको छ’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानबहादुर रानाले भने । बन डिभिजनबाट भएको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । स्थानीयको श्रमदान २० प्रतिशत सहित २४ लाख लागतमा लिगलिगकोट डाँडामा पूर्वाधार निर्माण भईरहेको छ । एक सातामा सबै काम सक्ने योजना रहेको उपभोक्ता समितिका सचिव बालकृष्ण अच्छामीले बताए ।
लिगलिगकोट पर्यटकिय गन्तब्यको रुपमा बिकास हुँदै गएको छ । निषेधाज्ञा हुनु अघि दैनिक सय जना र बिदाको दिन पाँच सय जना सम्म त्यहाँ घुम्न आउने गरेको स्थानीय बताउँछन् । लिगलिगकोटको इतिहास बेच्न नगरपालिकाले त्यहाँ होमस्टे, खानेपानी, सडक, शौचालय लगायत पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिईरहेको नगरप्रमुख दिपकबाबु कंडेलले बताए ।
लिगलिगकोट डाँडामा गोलघर, पार्क सहित वृक्षारोपण गरिँदैछ । त्यसका लागि पूर्णबहादुर रानाको अध्यक्षतामा छुट्टै समिति बनाइएको छ । ११ लाख ६० हजार लगानीमा बन्दै गरेको पार्क र बिरुवा रोप्ने काम धमाधम भईरहेको समितिका अध्यक्ष रानाले बताए ।
धुपी, सल्ला लगायतका बिभिन्न बिरुवा त्यहाँ रोपिने छ । डिभिजन बन कार्यालयले पर्यटकिय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने पर्यापर्यटनको बिकास गर्ने योजनाले उक्त कार्यक्रम संचालन गरिएको डिभिजन बन अधिकृत अशोककुमार श्रेष्ठले बताए ।